राजनिति – Page 19 – KarnaliPost Daily
२१ माघ २०७४, आईतवार ११:४०२१ माघ २०७४, आईतवार ११:४०२१ माघ २०७४, आईतवार ११:४० by Karnali Post DailyNo Comments
प्रदेश न. ४, राजनिति
आईतबार, २१ माघ २०७४ स्वराज भ्रमणको विरोध व्यक्तिगत कुण्ठा काठमाडौँः नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने खुलासा गरेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा नेता ज्ञवालीले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध थप सुमधुर भएको दाबी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने बताए । स्वराजको नेपाल भ्रमणअघि नै ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको टेलिफोन वार्तामा दुवै पक्षले एक–अर्कालाई भ्रमणको निम्तो दिएकाले सोही अनुसार मोदी नेपाल आउने ज्ञवालीले बताए । साक्षात्कारमा बोल्दै उनले वाम गठबन्धनले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर जान चाहेको सुनाए । ‘जसरी मोदीले ओलीलाई दुईपटक फोन गर्नुभ
२१ माघ २०७४, आईतवार ११:३६२१ माघ २०७४, आईतवार ११:३६२१ माघ २०७४, आईतवार ११:३६ by Karnali Post DailyNo Comments
रोल्पामा तीन एचआइभी एड्स संक्रमित फेला
प्रदेश खबर, प्रदेश न. ५, राजनिति
आइतबार, २१ माघ २०७४ रोल्पा । यही माघमा मात्र यहाँ तीन जना एचआइभी एड्स संक्रमित फेला परेका छन् । रोल्पा प्लसका अध्यक्ष राधा विकले माडी गाउँपालिकाका एक दम्पती संक्रमित भएको र तिनको नवजात शिशु पनि संक्रमित हुन सक्ने बताउनुभयो । साथै सुवर्णावती गाउँपालिकामा पनि एक महिला संक्रमित भएको खुलेको छ । प्रवासी श्रीमान्का कारण श्रीमान्–श्रीमती दुवै संक्रमित बन्न पुगेको अध्यक्ष विकको भनाइ छ । यी थप तीनसहित हाल जिल्लामा एचआइभी एड्स संक्रमितको संख्या ६४ पुगेको छ । संक्रमितमा २६ महिला, २४ पुरुष र तीन बालिका छन् । चौध जनाको भने यसअघि मृत्यु भइसकेको विकले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल जिल्लामा नौदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका महिला तथा पुरुष एचआइभी एड्स संक्रमित भएर संक्रमणसँग लडिरहेको अवस्था छ । जिल्लामा भएका सबैजसो एड्स संक्रमित श्रीमान्कै कारण संक्रमित बनेको उहाँको भनाइ छ ।रासस
२१ माघ २०७४, आईतवार ११:३३२१ माघ २०७४, आईतवार ११:३३२१ माघ २०७४, आईतवार ११:३३ by Karnali Post DailyNo Comments
श्रम अदालतले ६९ मुद्दा फछ्र्योट गर्यो
आइतबार, २१ माघ २०७४ काठमाडौँ । श्रम अदालतले साउनयता ६९ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अदालतले अघिल्लो र यस वर्षका १६१ मुद्दामध्ये ती मुद्दा फछ्र्योट गरेको अदालतका शाखा अधिकृत निधिराज दाहालले जानकारी गराउनुभयो । दर्ता भएका ९२ मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी छ ।साउनयता अदालतमा ३५ मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । श्रमिकले जहाँ काम गरेको हो त्यहाँ छिनोफानो नभएपछि न्यायका लागि श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँछन । उहाँका अनुसार फछ्र्योट गरिएकामध्ये बढीजसो निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरका बढी रहेका छन् । अदालतमा धेरैजसो नियुक्तिपत्र, सेवाबाट हटाइएको, तोकिएको तलब नदिएको जस्ता मुद्दा पर्ने गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी देवेन्द्रराज ढकालको एकल इजसालबाट हरेक हप्ता बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार फैसला हुने गरेको छ । अदालतले श्रमिकका मुद्दामात्र हेर्ने गरेको छ । अदालतले फछ्र्योट गरेका मुद्दा भने टेकु
२१ माघ २०७४, आईतवार ०७:२८२१ माघ २०७४, आईतवार ०७:२८२१ माघ २०७४, आईतवार ०७:२८ by Karnali Post DailyNo Comments
प्रदेश खबर, प्रदेश न. १, प्रदेश न. २, प्रदेश न. ३, प्रदेश न. ४, प्रदेश न. ५, प्रदेश न. ६, प्रदेश न. ७, राजनिति
आइतबार, २१ माघ २०७४ काठमाडौं । आज प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ को पहिलो प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । आज बस्ने प्रदेश बैठकहरु प्रदेश २ को जनकपुरमा, ५ को बुटवलमा, ६ को सुर्खेतमा र ७ को धनगढीमा बैठक बस्ने भएको हो । यसअघि प्रदेश नम्बर ३ को बैठक सम्पन्न भईसकेको छ । प्रदेश ३ को पहिलो बैठक माग १८ मा भएको थियो । बाँकी प्रदेशहरु १ र ४ मा भने भोली सोमबार बैठा बस्ने तयारी हुँदैछ । आज बैठक बस्न लागिएको चारवटै प्रदेशमा बैठकको कार्यसूची निर्धारण भईसकेकको छ, जस अनुसार बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गरेको पत्र वाचन गर्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि अन्तरिम प्रदेशसभा सञ्चालक कार्य्विधि पारित गर्ने र सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्ने बैठकको मुख्य कार्यसूची छ ।
२० माघ २०७४, शनिबार १०:१८२० माघ २०७४, शनिबार १०:१८२० माघ २०७४, शनिबार १०:१८ by Karnali Post DailyNo Comments
प्रदेश नम्बर ६ को पहिलो अधिवेशन तयारी हुदै
प्रदेश न. ६, राजनिति
सुर्खेत ः प्रदेश नं ६ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकका लागि तीव्र तयारी भईरहेको छ । भोलि २१ गते दिउँसो १ बजे बस्ने पहिलो अधिवेशनका लागि कार्य्विधि, सभा स्थलको व्यवस्थापनलगायतका तयारी भएको प्रदेश सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेशसभाको बैठकका लागि तय गरिएको सिँचाइ विभाग डिभिजनको भवन र सभाहल सजाउने, रङरोगन, गेट निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । पहिलो बैठकमा पेश गरिने एजेण्डालगायतको टुंगो लागिसकेको छ । सचिवालयले शुक्रबार सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर बैठकमा पेश गर्ने एजेण्डा र अर्को मितिको पनि टुंगो लगाएको जनाएको हो । पहिलो बैठकमा सभामुखको भूमिका ज्येष्ठ सदस्य काँग्रेसका हिमबहादुर शाहीले निर्वाह गर्नेछन् । सर्वदलीय बैठकले सचिवालयले बनाएको अन्तरिम कार्य्विधि पारित गर्नुका साथै सभामुखको निर्वाचनका लागि दोस्रो बैठकको मिति पनि तय गरेको हो ।
२० माघ २०७४, शनिबार ०४:३३२० माघ २०७४, शनिबार ०४:३३२० माघ २०७४, शनिबार ०४:३३ by Karnali Post DailyNo Comments
प्रदेश खबर, प्रदेश न. ६, राजनिति
प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दल एमाले–माओवादी नाम र राजधानीबारे एकमत सुर्खेत ः प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा धेरै ठाउँमा विवाद उत्पन्न भयो । वीरगन्ज र दिपायलमा कैयौँ दिन आन्दोलन नै चल्यो, तर प्रदेश ६ भने अपवाद रह्यो । अब प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति देखिएको छ । दलका नेताहरू भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ राख्ने तय भएको छ ।’ संविधानको धारा २९५ मा प्रदेश सभाका दुईतिहाइ सदस्यले प्रदेशको नामकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश ६ को नामकरणमा दलहरूभित्र अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । त्यसैले औपचारिक रूप भने लिइसकेको छैन । एमाले प्रदेश कमिटी सहसंयोजक यामलाल कँडेलले प्रदेशको नाम कर्णाली राखिने दाबी गरे । ‘प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर हुन्छ,’ कँडेलले भने । यसमा माओवादी केन्द्रका नेता पनि सहमत छन् । माओवाद
१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:५६१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:५६१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:५६ by Karnali Post DailyNo Comments
प्रदेश न. ६, राजनिति, समाज
सुर्खेत ः प्रदेश सहसंयोजक कँडेललाई संसदीय दलको नेता बनाएर आफू सभामुख बन्ने प्रकाश ज्वालाको योजना वाम गठबन्धनबीच प्रदेश ६ मा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री र एमालेले सभामुख पाउने सहमति भइसकेको छ । तर, एमालेको आन्तरिक विवादले सभामुख को हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा नेताहरु प्रकाश ज्वाला र यामलाल कँडेलमध्ये एकजना सभामुख हुनेछन्। यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला एमाले नेताहरूका अनुसार ज्वाला सभामुखमा जाने मनस्थितिमा छन् । उनी सभामुख भए कँडेल संसदीय दलको नेता हुनेछन् । यो समीकरण अनुसार सहमति नभए आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालेर ज्वाला प्रदेश सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । मुख्यमन्त्री हुने र प्रमुख सत्तासाझेदार दलले आन्तरिक मामिला वा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमध्ये एक लिनेछन् । ज्वालाको विकल्पमा कँडेल सभामुख हुने सम्भावना छ । तर, कँडेलले स
१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:४९१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:४९१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:४९ by Karnali Post DailyNo Comments
शुक्रबार, १९ माघ २०७४ धनगढी । माओवादी केन्द्रले प्रदेश नं ७ को मुख्यमन्त्रीका लागि डोटीबाट प्रदेशसभामा निर्वा्चित सांसद त्रिलोचन भट्टलाई सिफारिस गरेको छ । वाम गठबन्धनले प्रदेश नं ७ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति गरेसँगै उक्त दलले शुक्रबार पार्टीको प्रदेश कार्यालयबाट सांसद भट्टको नाम सिफारिस गरेको हो । उक्त दलका प्रदेश नं ७ संयोजक लक्ष्मणदत्त जोशीले शुक्रबार काठमाडौँमा भएको प्रदेश कार्यालयको बैठकले भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब दुई÷तीन दिनभित्र केन्द्रले निर्णय गर्छ होला ।” यसअघि २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा भट्ट पराजित भएका थिए । बिहीबारसम्म माओवादीभित्र भट्टसँगै कैलालीबाट निर्वा्चित सांसद वीरभान चौधरी र दार्चुलाका सांसद मानबहादुर धामीको नाम चर्चामा थियो । प्रदेशसभामा उक्त दलबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सांसद छन्
१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:३०१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:३०१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:३० by Karnali Post DailyNo Comments
स्वराज यात्रा ः नेपाललाई चीनको हातमा जान नदिने भारतीय प्रयास
शुक्रबार, १९ माघ २०७४ काठमाडौं स् वाम गठबन्धन सरकारमा गइनसकेको र शेरबहादुर देउवा सरकारको बहिर्गमन भइनसकेको संक्रमणकालिन अवस्थामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट अर्थपूर्ण र श‌ंकास्पदरुपमा हेरिएको छ । नेपालले औपचारिक निम्तो नै नदिई पूर्णतया भारतीय इच्छा र चहानामा भएको यो भ्रमणले देशमा विभिन्न स‌ंशय पनि पैदा गरेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनबीच एकताको गाँठो फुक्न नसकेको अवस्थामा भारतीय विदेश मन्त्रीको यो भ्रमणले सर्वसाधरणमा श‌ंका जन्माएको छ । ६ महिना लामो नाकाबन्दी लगाएसँगै नेपालले भारतसँगको व्यापारिक एकाधिकार तोड्न चीनसँग सम्बन्ध बढाएको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग व्यापारिक तथा अन्य सामरिक महत्वका सम्झौता गरेसँगै भारतले नेपाल आफ्नो हातबाट फुत्केको भन्दै चिन्ता जनाइरहेको थियो । नेपाललाई आफ्नो हातबाट चीनलाई सुम्